PressReader - Ilanga: 2017-11-13 - UNyazi siyophuma nalo eBuhleni
UNyazi siyophuma nalo eBuhleni
Ilanga - 2017-11-13 - Imibono - N.E Msomi eNkanyisweni Temple
MHLELI: Ngicela ungiphe isikhala ngiveze owami umbono mayelana necala elisenkantolo eliphakathi kwezinhlangothi ezimbili (zamaNazaretha) olwaseThembezinhle nolwaseBuhleni.
Ngifuna ukucacisa ukuthi mhla kukhothama iNkosi iLanga - uGalilee Shembe - (ukuthula kube kuyo) kwaba nokuhlukana kwebandla okwaholela ekubeni iNkosi iNyangayezulu, u-Amos Shembe, (ukuthula makube kuyo) ixoshwe kubo yahamba nomndeni wayo yayofuna indawo eNkosini yamaQadi.
INyangayezulu yayihamba nomndeni wayo, uThingolwenkosazane, iNkosi Vimbeni Shembe, (ukuthula kube kulo) nenkosi ekhona manje (eBuhleni) uNyazilwezulu, iNkosi Mduduzi Shembe, bafika banikwa ihlathi abalicaba laze laba yiseBuhleni.
Njengoba iNkosi uNyazilwezulu yayikhona ngesikhathi kwakhiwa lo muzi waseBuhleni, okuyikhaya lakubo futhi kuyisihlalo sikayisemkhulu, nithi mayibhekephi?
Nakhu okumele umhlaba ukwazi, le nto yecala icacile nje ukuthi kubangiswa iNkosi uNyazilwezulu ngoba nakhu uMoya Ongcwele uvuna yona, thina-ke kasiyi ndawo eBuhleni noma inkantolo ingathini, thina sizolalela inkosi esiholayo ukuthi ithini.
Uma kusho yona ukuthi masiphume eBuhleni, siyokwenza lokho - olwethu uNyazi noma bangathini.
Akekho umuntu osiphoqayo ukuthanda uNyazilwezulu kodwa siphoqwa yizinhliziyo zethu nokwazi iqiniso.